त्यहाँ धेरै केश हटाउने विधिहरू छन्, जुन हाम्रो लागि सबै भन्दा राम्रो कपाल हटाउने हो? - टेक्निकल जानकारी - शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण तकनीक कम्पनी लिमिटेड
त्यहाँ धेरै केश हटाउने विधिहरू छन्, जुन हाम्रो लागि सबै भन्दा राम्रो कपाल हटाउने हो?
समय: 2019-10-18 हिट्स: 134
त्यहाँ धेरै केश हटाउने विधिहरू छन्, हामी हेरौं जुन हाम्रो लागि उत्तम कपाल हटाउने हो।
तपाईंको हात र खुट्टाबाट अनावश्यक ईन्ग्राउन कपालहरू हटाउने धेरै तरिकाहरू छन्। हामीसँग प्रत्येक लोकप्रिय तरिका जुन बजारमा उपलब्ध छन् र प्रत्येकसँग भएका फाइदाहरूसँग विस्तृत रूपमा हेर्ने छन।
हार्मोनल परिवर्तनका कारण कपालको बृद्धि हुन सक्छ। यो पनि आनुवंशिकीको कारणले हुन सक्छ। यदि तपाईं आफ्नो शरीरमा बढ्दो कपालबाट चिन्तित हुनुहुन्छ भने, प्रत्येक विधिको साथ प्रदान गरिएको सुझावहरूको पालना गर्नुहोस्। यहाँ तरिकाहरू हेर्नुहोस्, हामीले सजिलैसँग शरीरको कपाल हटाउनुपर्दछ:
सेभिंग एउटा कपाल हटाउन सब भन्दा छिटो र सजिलो तरीका हो र आफ्नो दिन जारी राख्नुहोस्। चाहे तपाइँ एक डिस्पोजेबल शेभर वा इलेक्ट्रिक शेभर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, दुबै भित्र निर्मित ब्लेड छ जसले छालाको सतहमा कपाल उठाउँदछ र काट्छ।
सेभर शरीरको विभिन्न भागहरूमा काम गर्न सक्छ, तपाईंको सहित:
Ik बिकिनी क्षेत्र
तिनीहरूले पनि सुरक्षित बाट तपाईको कपाल हटाउन सक्नुहुन्छ:
● माथिल्लो ओठ
२ ट्वीज गर्दै
शरीरको कपाल हटाउनका लागि ट्वीजिंग अर्को प्रभावकारी र सस्तो तरिका हो। यो विधि सेभिंग भन्दा केही फरक काम गर्दछ। रेजर ब्लेडको साथ कपाल हटाउनुको सट्टा, चिमटीहरू जराबाट कपाल काट्न वा तान्नको लागि डिजाइन गरिएको हो।
ट्वीजिंगले कुनै पनि अनुहार वा शरीरको कपालमा काम गर्दछ। भौंलाई आकार दिंदा यो विशेष गरी उपयोगी हुन्छ। सामान्यतया, ट्वीज गर्ने परिणाम शेवि। भन्दा लामो हुन्छ - तीन देखि आठ हप्ता सम्म।
अनुहारको कपाल ट्वीज गर्न, यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
१. तपाईंले सुरु गर्नु अघि छाला नरम बनाउन तपाईंको अनुहार न्यानो वाशकोलोथले पोछा।
२. तपाईले कपाल खोल्न चाहानु भएको केशलाई पृथक गर्नुहोस्।
Your. तपाईको छाला टाउको समातिरहँदा एक पटकमा एउटा कपाल तान्नुहोस्।
Always. कपालको विकासको दिशामा सँधै तान्नुहोस् वा तन्नुहोस्।
ट्वीजिंगले हल्का असुविधा निम्त्याउन सक्छ, तर यो प्रायः दर्दनाक हुँदैन। यदि तपाईंलाई दुखाइ छ भने, रातो र सूजन कम गर्न क्षेत्रमा एक बरफ घन रगनुहोस्।
पिउनुभन्दा पहिले र पनी पियक्कडको रक्सीको साथ निवारण निश्चित गर्नुहोस्। शेवि Like जस्तो, ट्वीजिंगले इr्ग्रउन कपालहरूलाई पनि निम्त्याउन सक्छ।
Epilation अनुहार वा शरीरको कपाल हटाउन को लागी अर्को विकल्प हो। यस प्रविधीले चार हप्ता सम्म कपाल हटाउन सक्छ, जुन तपाई उत्तम हुनुहुन्छ यदि तपाई व्यस्त हुनुहुन्छ र नियमित रुपमा दाह्री बनाउनु वा ट्वीज गर्न चाहनुहुन्न भने उत्तम विकल्प हुन सक्छ।
इपिलेटरहरू ट्वीज गर्ने र दाह्री खान्ने काम गर्दछन्। फरक यो छ कि एपिलेटरहरूले अनुहारको कपाल हटाउँदछन् एकै समयमा धेरै कपालहरू समातेर र तिनीहरूलाई जराबाट हटाएर। किनकि कपाल जराबाट हटाइएको छ, पछाडि बढ्न यसले लामो लिन्छ। कहिलेकाँही, इपिलेसनले कपाल नरम र अझ राम्रोसँग हुर्कन्छ। किनाराहरू कम ध्यान दिएर हुन सक्छ।
खुट्टाहरू वा शरीरको ठूलो क्षेत्रहरूबाट कपाल हटाउँदा तपाईं केवल एपिलेटरहरूको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ। तर एपिलेटरहरू धेरै आकारमा आउँदछन्, जसले शरीरको सबै भागमा विशेष गरी खुट्टा र हतियारहरूको कपाल हटाउनको लागि तिनीहरूलाई आदर्श बनाउँछ।
एपिलेटर प्रयोग गर्दा तपाईंले आफ्नो छाला तयार गर्नुपर्दैन। जे होस्, केहि दिन अगाडि एक्सोफोलाइटी गर्नाले छाला नरम हुन र बाक्लो कपालको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रक्रिया पीडादायी हुन सक्छ, तर ढिलो गर्नाले असुविधा कम गर्न सक्छ। यदि तपाईं पछि कोमलता छ भने, सूजन र सूजन कम गर्न पीडादायी स्पटहरूमा एक बरफ घन लागू गर्नुहोस्।
At. घर मा वाक्सिंग
Waxing एक क्षेत्र मा सबै कपाल हटाउन को लागी एक प्रभावी तरीका हो। त्यहाँ दुई अलग प्रकारको वेक्सिंग किट्स छन्:
● मोम स्ट्रिपहरू जुन तपाईंले आफ्नो हातहरू बीच दाम दिनु अघि गर्मि गर्नुहुन्छ
● मैन जुन न्यानोमा पग्लिन्छ र त्यसपछि स्टिकको साथ क्षेत्रमा लागू हुन्छ
जब तपाइँ मोमको लागि किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ, नरम मोम, वा अनुहारमा प्रयोगको लागि बनाइएको मोमको लागि हेर्नुहोस्। हार्ड मोम तपाईको खुट्टा र बिकिनी क्षेत्रका लागि उत्तम छ।
यदि तपाईं घरमा न्यानो हुनुपर्ने मोम छनौट गर्नुहुन्छ भने, एक मैन को तातो किन्नुहोस्। एक मोम गरम गर्नाले एकै तरीकाले मोमलाई तताउने छ र तपाईंलाई तापक्रममा राम्रो नियन्त्रण गर्न अनुमति दिँदछ। साथै, निश्चित गर्नुहोस् कि प्रत्येक स्टिक एक पटक मात्र प्रयोग गर्न धेरै वैक्सिंग स्टिकहरू खरीद गर्नुहोस्। "डबल डिपिंग" ले मोममा ब्याक्टेरिया परिचय गर्न सक्दछ र छालामा संक्रमण हुन सक्छ।
तपाइँ मैन गर्नुभन्दा पहिले, तपाइँको एलर्जी प्रतिक्रिया विकास भयो कि भनेर हेर्नको लागि तपाइँको छालामा प्याच टेस्ट गर्नुहोस्, र यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि मोक्स ठीक तापमान छ। मैनले असहज तातो महसुस गर्नु हुँदैन। यो सजिलै तपाइँको छाला मा सरकनु पर्छ।
Waxing असहज हुन सक्छ, तर यो दर्दनाक हुनु हुँदैन। वैक्सिंगको कारण एक्ने र इन्ग्राउन कपालहरूको विकास हुन सक्छ। यसलाई बेवास्ता गर्नु पर्छ यदि तपाई retinoids प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
Home. गृह आईपीएल कपाल हटाउन प्रयोग
धेरै कपाल हटाउने विधिहरूसँग मुख्य समस्या भनेको परिणामहरू अस्थायी हुन्छन् वा केही हप्ता मात्र पछि हुन्छ। लामो परिणामको लागि, गृह आईपीएल कपाल हटाउन को लागी विचार गर्नुहोस्।
यस विधिले कपालको फोलिकल्सलाई क्षति पुर्‍याउन लेजर र पल्सटिंग बीमहरू प्रयोग गर्दछ, जसले कपाल हराउँदछ। यो एक अर्ध-स्थायी समाधान हो - कपाल लगभग छ महिना पछि पछाडि बढ्छ। कहिलेकाँही, कपाल कहिल्यै पछि पछि हुर्किदैन। यदि कपाल फिर्ता, यो राम्रो र unnoticeable हुन सक्छ।
यद्यपि यो कुनै गोप्य कुरा छैन कि केश हटाउनको निरन्तर प्रक्रिया समस्याग्रस्त र थकाउने हो। घर प्रयोग आईपीएल कपाल हटाउन को लागी एक सानो महँगो हुन सक्छ तर जब तपाईं यसलाई सबै रेज़र, waxing पट्टिहरु आदि प्रयोग तुलना गर्न को लागी तुलना गर्न को लागी यो लामो समय मा काफी सस्ता छ। इच्छित परिणामहरू प्राप्त गर्न सामान्यतया डाक्टर वा मेड स्पाको लागि केही यात्राहरूको आवश्यक पर्दछ। जब तपाईं सेभिंगबाट थकित हुनुहुन्छ, घर प्रयोग आईपल कपाल हटाउने सबै भन्दा राम्रो समाधान हुन सक्छ। घर प्रयोग आईपल कपाल हटाउन को लागी अनावश्यक कपाल को हटाउन को लागी सबैभन्दा प्रभावी तरीका हो, तपाईं आफ्नो गतिविधिहरु लाई अधिक समय खर्च गर्न को लागी अनुमति दिए।
घर प्रयोग आईपीएल कपाल हटाउने एक गैर इनवेसिव उपचार स्थायी रूपमा अनावश्यक कपाल को कम र हटाउन को लागी हो। नतिजाको रूपमा छाला दाह्री वा वाक्सि for आदि नगरी नरम देखिन्छ।
घर प्रयोग आईपल कपाल हटाउन अनुहार मा कहीं पनि प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, जस्तै माथिल्लो ओठ र चिन। तर तपाई लेजरहरू जोगिनु पर्छ जब पलक र वरपरका क्षेत्रहरूबाट कपाल हटाउने। घर प्रयोग आईपल कपाल हटाउने को सामान्य साइड इफेक्टहरू रातोपन र कोमलता हुन्। असुविधा कम गर्न बरफ प्रयोग गर्नुहोस्।
शेन्जेन नोबल विश्वास गर्दछन् कि कपाल घटाउने (90 ०% सम्म) छुटकाराको सबैभन्दा प्रभावकारी तरीका आईपीएल कपाल हटाउने माध्यम हो तर हामी यो पनि बुझ्दछौं कि यो कुनै पनि सौन्दर्य प्रविधिको बारेमा छ भने सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। हामी हाम्रो प्रक्रियाहरूमा सबै भन्दा राम्रो हेरचाह संग इष्टतम परिणाम सुनिश्चित गर्न सबै भन्दा राम्रो Insese स्पन्दित प्रकाश आईपीएल कपाल हटाउने टेक्नोलोजी प्रदान गर्दैछौं। हामीले प्रयोग गर्ने सबै विधिहरू क्लिनिक रूपमा अनुमोदित छन् र सबै छालाका प्रकारहरूका लागि हानिकारक छैनन्।
Ila. Depilatory क्रीम
कपाल हटाउन को लागी Depilatory क्रीम अर्को विकल्प हो। परिणामहरू दाह्री भन्दा लामो समय सम्म रहन सक्छ र यी क्रीमहरू waxing भन्दा सस्ता हुन सक्छ।
यी क्रीमहरूमा सोडियम, टाइटेनियम डाइअक्साइड, र बेरियम सल्फाइड जस्ता रसायन हुन्छ जसले केशमा प्रोटिनहरू तोड्दछ जसले गर्दा यो सजिलैसँग विघटन हुन्छ र धुन्छ। यद्यपि यी सामग्रीहरू सामान्यतया सुरक्षित छन्, त्यहाँ प्रतिक्रियाको लागि एक जोखिम छ।
यदि यो तपाइँको प्रथम पटक डिपाइलेटरी क्रीम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, पहिले प्याच टेस्ट गर्नुहोस् र तपाईंको छालामा क्रीमको थोरै मात्रा लागू गर्नुहोस्। प्रतिक्रियाको स्केतहरूमा छालाको रातोपन, बम्प्स, र खुजली समावेश छ।
यी उत्पादनहरू जेल, क्रीम, र लोशनको रूपमा उपलब्ध छन्। जबकि यी क्रीमहरूले शरीरको कुनै पनि भागमा कपाल हटाउन सक्दछन्, केहि क्रिम खास गरी अनुहारको कपालका लागि डिजाइन गरिएको हो। यसको मतलब तिनीहरू अनुहार चिल्लो, एक्स्फोलिएट र ओसिलोइज पनि गर्छन्।
थ्रेडिंग भौंलाई आकार दिन र अनुहारको अनुहारको रौं हटाउनको लागि अर्को विकल्प हो, माथिल्लो ओठमा, अनुहारको छेउमा, र चिनो। यस विधिले एक थ्रेड प्रयोग गर्दछ, जसले अनावश्यक कपाल तान्छ र मारा गर्दछ जब सम्म यो कपालको कपालबाट खल्दैन। परिणाम शेभिंग वा चिमोट भन्दा लामो समय सम्म रहन सक्छ, अधिक यो विधि ई this्ग्रोउन कपाल पैदा गर्दैन।
थ्रेडिमा रसायन पनि समावेश हुँदैन। त्यसोभए, छालाको प्रतिक्रियाको कुनै जोखिम छैन, यद्यपि तपाईंले हल्का पीडा वा असुविधा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईंको टेक्नीशियनले फोलिकल्सबाट कपाल हटाउँदछ। दुखाई कम गर्न, आफ्नो टेक्नीशियनलाई तपाईंको अनुहारमा सुन्न क्रीम लागू गर्न भन्नुहोस् वा पछि तातो कम्प्रेस लागू गर्नुहोस्। कपाल हटाउने यो विधिलाई कौशल चाहिन्छ, त्यसैले तपाईंले प्रशिक्षित कस्मेटोलोजिस्ट वा एस्थेटिशियन खोज्नु पर्छ।
थ्रेडिंग विकल्प नहुन सक्छ यदि तपाईं एक्ने हुनुहुन्छ, किनकि यसले बम्प्स फुटाउन सक्छ।
म आशा गर्दछु कि तपाईले यो जानकारी उपयोगी पाउनु भयो। थम्ब्स अप यदि तपाईंलाई यो चाख लाग्यो। चियर्स !!! :-)
अघिल्लो: स्थायी कपाल हटाउने र आईपीएल स्थायी कपाल हटाउने बिचको भिन्नता वैक्सिंग
अर्को: आईपीएल लेजर कपाल हटाउने उपकरण घर मा - के त्यहाँ कुनै साइड इफेक्ट छन्?